on: 11 Nov, 2017
စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက တကယ်တော့ အများကြီးပါ။ ယေဘာယျအားဖြင့် ရန်ကုန်မြို့နေ လူထုအတွက်ဆို ထရပ်ဖစ်ဂျန်းဆိုတဲ့ မော်တော်ယာဉ်ပိတ်ဆို့နေတဲ့ကိစ္စ၊ လျှပ်စစ်မီးပျက်နေတဲ့ မော်တော်ယာဉ်ပိတ်ဆို့နေတဲ့ ကိစ္စ၊ လျှပ်စစ်မီးပျက်နေတဲ့ ကိစ္စနဲ့ မိုးတွင်းလမ်းပေါ် ရေလျှံနေတဲ့ ကိစ္စတွေပါ။ တကယ်တော့ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တူချင်မှတူတာပါ။ ကိုယ်နှစ်သ...
လူတစ်ယောက်ဟာ စိတ်ကျဝေဒနာရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ဖို့ရာ သူတို့မှာ အောက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာတွေထဲက ငါးခုနှင့်အထက် ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ် (၁) နှင့် (၂) ထဲက အနည်းဆုံးတစ်ခုကတော့ ရှိရမှာဖြစ်ပြီးတော့ ဒီရောဂါလက္ခဏာတွေကို နှစ်ပတ်အနည်းဆုံးခံစားရမယ်ဆိုရင် စိတ်ကျဝေဒနာရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ် (၁) ကတော့ အမြဲလိုလို စိတ်ညစ်ပြီးတော့ ပူဆွေးဝမ်းနည်းမှုတွေ ရှိနေမယ် ဒါမှမဟုတ်ရ...
စိတ်ဓါတ်ကျပြီးမပျော်မရွှင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် အောက်ဖော်ပြပါသဘာဝနည်းလမ်းတွေက သင့်ကိုကူညိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကိုပျော်ရွှင်စေမည့်အစာအာဟာရ တချို့အစားအစာတွေကဦးနှောက်ကိုလန်းဆန်းနေစေပြီးစိတ်ကိုတက်ကြွနေစေတာမျိုး တွေရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့် Serotonin ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ငါးအဆီ၊ Omega-3 Fatty acid ၊ ကျန်းမာတဲ့အဆီတွေဖြစ်တဲ့အုန်းဆီ၊ ချယ်ရီသီးနဲ့ ဥအမျိုးမျိုးတွေမှာပါ၀င်ပါတယ်။
၁. ကော်ဖီတစ်ခွက်သောက်ပါစိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေတဲ့အခါ အာရုံစူးစိုက်မှုက အလိုလိုလျော့နည်းသွားတတ်ပါတယ်။အဆီဖယ်ထားတဲ့နွားနို့အစား မလိုင်အပြည့်ပါတဲ့ နွားနို့နဲ့ဖျော်ထားတဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်သောက်လိုက်ပါ။စိတ်ဖိစီးမှုတွေ သိသိသာသာလျော့ကျသွားပါလိမ့်မယ်။၂. စွမ်းအားပြန်လည် ဖြည့်တင်းပါစိတ်ဖိစီးမှုတွေများတဲ့အခါ စိတ်ရောလူပါ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာကြောင့် အနားယူပြီး စွမ်းအင်တွေပြန်လည်...
ဒေါသရဲ့ ကောင်းကျိုးများ• မတရားမှုကို အဖြေရှားဖို့ ကျွန်တော်တို့ကို စေ့ဆော်တိုက်တွန်းတယ်။ • ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပုံသေဖြစ်နေတဲ့ အကန့်အသတ်တွေကို ကျော်လွန်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေအတိုင်း အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့်ဖြစ်မဖြစ် စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ တွန်းအားပေးတတ်တယ်။ • အရင်တုန်းက လျစ်လျူရှုထားခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ သတိပေးတတ်ပါတယ်။• ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခံစား...
မကောင်းမှုကိုရှောင် ၊ ကောင်းမှုကို ဆောင်
on: 14 Oct, 2017
စိတ်သန့်ရှင်းရေးသည် စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးသည်။ စိတ်သန့်ရှင်းရန် အညစ်အကြေးများကို ရှင်းလင်းဖယ်ထုတ်ပစ်ရမည်။ စိတ်အညစ်အကြေးများးဆိုသည်မှာ မကောင်းသည့်စိတ်များကို ဆိုလိုသည်။ မကောင်းသည့် အပြောအဆို အပြုအမူများကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားဖြင့် မကောင်းသည့်စိတ်များ လျော့ပါးသွားနိုင်ပါသည်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘဆရာသမားများက လိမ္မာယဉ်ကျေးအောင် အပြစ်ကင်းစွာ ပြောတတ်နေတတ်အောင် ဆိုဆုံးမခဲ့ကြသည်...
Autism spectrum disorderအော်တဇင်
အော်တဇင်ဆိုတာ ဦးနှောက်တစ်နေရာရာက ဖွံ့ဖြိုးမှု အရှိန်လွန်ပြီး ဦးနှောက်ရဲ့အခြားနေရာတွေနဲ့ စည်းကိုက်ဝါးကို်က် လိုက်လျောညီထွေမပြုမူနိုင်တော့တဲ့ ပြဿနာပါ။မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ သက်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ကြီးပြင်းရာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မသက်ဆိုင်ပါ။ရောဂါဖြစ်ရခြင်း အခြားအကြောင်းရင်းများကိုရှာဖွေနေဆဲပါ။လက္ခဏာများအော်တဇင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပုံမှန်မဟုတ်တာခြင်း မတူပါဘူး။ ဒါပေမယ့်...
ဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်းနှင့် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းခြင်း
စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်ဖြစ်ရပ်ရဲ့ အကျိုးဆက်အဖြစ် မိမိဆုံးရှုံးသွားခဲ့တာမှန်သမျှကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ၊ မိသားစုဝင်တွေ ဒါမှမဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှု ဥစ္စာပစ္စည်းတွေ ဆုံးရှံုးခဲ့ရတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က တစ်စုံတစ်ခု ဆုံးရှံုးသွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်၊ ကျန်းမာရေး ဒါမှမဟုတ် ဘေးကင်းလုံခြံရေး အစရှိတဲ့ တစ်စုံတစ်ခု ဆုံးရှံုးသွားတာမျိုးလည်...
ကဖိန်းဓာတ်ဟာ အပင်တွေကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။ လူက ပြုပြင်ပေးထားတဲ့ ဓာတ်ပါ။ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုပျောက်ဆေး၊ စားချင်စိတ်ထိန်းချုပ်ဆေး၊ အအေးမိပျောက်ဆေး တို့လို အမျိုးအစား များပြားလှတဲ့ ဆေးဝါးတွေ၊ မနည်းလှတဲ့ အစားအစာထုတ်ကုန်တွေလို အဖြည့်ပစ္စည်း အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ၊ ချောကလက်၊ ကိုကာ၊ ကိုလာနဲ့ စွမ်းအားဖြည့်အချိုရည်လို့ ခေါ်တတ်ကြတဲ့ အချိုရည်တွေထဲမှာ အမယ်ပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့...
on: 09 Sep, 2017
အိပ်ရာထဲရောက်ခါမှ အိပ်မပျော်ဖြစ်တာဟာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့လည်း ဆက်နွယ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖြေရှင်းလိုက်နိုင်ရင်တောင် ဆက်ပြီး အိပ်မပျော်ဖြစ်နေတတ် ပါတယ်။ ဒီလိုပုံစံမျိုးကို အပျော့စားမျက်စိကြောင်အိပ်မပျော်နိုင်ခြင်းလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒီပုံစံကို လှည့်ပြောင်းပစ်နိုင်ဖို့အတွက် မိမိရဲ့ အိပ်ရာနဲ့ အိပ်ခန်းကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘယ်လိုပြင်ဆင...